Welcome to Aayaha Nolosha » HAWEENAY OON KU DISHAY GABAR 5-SANO JIR AH
HAWEENAY OON KU DISHAY GABAR 5-SANO JIR AH
December 29, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Haweeney lagu eedeeyay inay gabar yar oo Shan sano jir ah ku eegatay inay oon u dhimato xilli qoraxduna ay aad u kululayd ayaa waxa ay wajahaysaa in lagu fuliyo ciqaab adag.
Haweenaydan oo la sheegay inay xubin ka ahayd ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah ee ka dhisan dalka Ciraaq ayaa waxay u dhalatay dalka Jarmalka, waxaana lagu magacaabaa Jennifer W.
Ninkeeda ayaa waxa uu canugtaa yar u keensaday ‘addoonsi’ magaalada Muusil ee dalka Ciraaq ee uu gacanta ku hayay ururka la baxay dowladda Islaamiga ah sanadku markuu ahaa 2015.
Ninka Jennifer qaba ayaa waxa uu gabadha ku katiinadeeyay bannaanka kadib markii ay xanuunsatay, iyadoo Jennifer W-na aysan badbaadinin.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Jennifer ay wajahayso dacwado ah inay dil gaysatay iyo inay hub dambi ku gaysatay, waxaana la filayaa haddiiba lagu helo dambiyada loo haysto ee ay qaadayso maxkamadda qaadda falalka argagixisada ee magaalada Munich dalka Jarmalka in lagu xukumo xabsi daa’im.
Gabadha Shan sanno jirka ahayd ee sida bini’aadannimada ka baxsan loo dilay ayaa waxa ay ka mid aheyd maxaabiis dagaal oo Jennifer W iyo ninkeeda ay soo kaxaysteen.
Warbaahinta Jarmalka ayaa waxa ay ku warramaysaa in gabadhu ay u badan tahay inay ka tirsanayd qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Yazidi, qowmiyaddaas oo intooda badan ay qabsadeen addoonsi ahaanna u haysteen maleeshiyaadka ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah ee la wareegay waqooyiga dalka Ciraaq.
“Haweeneyda eedaysan waxa ay ogolaatay in ninkeedu uu sidaas sameeyo mana aysan jirin wax ay gabadhaasi ku badbaadin kartay.”
Jennifer W waxa ay waddanka Ciraaq u kicitintay sanadkii 2014, markaas oo ay xubin ka noqotay ururka Daacish, waxa ayna shaqadeedu aheyd inay gaaf wareegto goobaha lagu nasto ee magaalada Muusil iyo magaalada kale ee ay Daacish ka talinaysay ee Falluujah, waxa ayna ku hubaysneyd AK47, bastoolad iyo suun laga soo buuxiyay walxaha qarxa, dacwad oogayaasha ayaa sidaa sheegay.
“Sidoo kale shaqadeedu waxa ay aheyd inay xaqiijiso in haweenku ay raacaan dhaqanka iyo shuruucda lebiska ee ururkaasi argagixisada ah,” ayaa bayaanka lagu yiri.
Jennifer W. mar ay tagtay dalka Turkiga ayaa waxaa xiray booliska Turkiga bilooyin kaddib geerida gabadha markaas oo ay booqanaysay safaaradda Jarmalka uu ku leeyahay magaalada Ankara si ay warqadaheeda aqoonsiga u soo cusboonaysiisato.
Waxaa loo dhoofiyay dalkeeda Jarmalka, halkaas oo markii hore loo ogolaaday inay dib ugu laabato gurigeeda sababtoo ah ma aanay jirin caddeymo loo hayay falalka ay gaysatay.
Booliska Jarmalka ayaa waxa ay xireen bishii Juun ee sanadkan mar ay isku dayaysay inay u safarto waddanka Suuriya, tan iyo markaana waa ay xirneyd, ilaa iyo haatanna taariikh looma qaban dhageysiga dawcadda loo haysto.